Barfi! (2012) – Myanmar Subtitles
Genre: Comedy, Drama, Romance Director: Anurag Basu Actors: Ileana D'Cruz, Priyanka Chopra, Ranbir Kapoor, Saurabh Shukla Country: India Released: 14 Sep 2012 Score: 8.1 Duration: 151 min Quality: 720p Years: 2012 View: 3,508
Imdb 8 ကျော် rating ကားတွေဟာ အညွှန်း သိပ်ပေးစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်။ အချစ်ကိုဦးစားပေးတဲ့ကားမျိုး ရင်ထဲကို ခပ်ပြင်းပြင်းထိစေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကိုမှ ကြိုက်သူတိုင်းအတွက်တော့ မလွတ်တမ်းကြည့်ရမဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးပါ။ ဆွဲ့အနားမကြား အမိမဲ့သား ကောင်လေးတစ်ယောက် ချစ်ခြင်းတရားသံယောဇဉ် ဆိုတာကို စကားလုံးတွေ၇ှိမှပုံဖော်နိုင်တာလား။ စကားလုံးတွေမပါဘဲ ပေးနိုင်တဲ့ရသတွေ ဓါတ်ပုံသမားတွေရဲ့ မြင်ကွင်းဆန်ဆန် အနုပညာလက်ရာမြောက် ရိုက်ချက်တွေ နဲ့ ဇာတ်လမ်းတည်ထားတဲ့ ရထားလေးနဲ့မြို့လေး Darjeeling ကို တခေါက်လောက်တော့ ရောက်ဖူးချင်လိုက်တာလို့ ဖြစ်သွားစေနိုင်လောက်မဲ့စွဲဆောင်မှုမျိုး ပေးနိုင်တဲ့ နုဖတ်နေတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုပါ။ filmfare award မှာ ၁၃ ခုဆန်ကာတင်ဝင်ပီး ဆုခုနှစ်ခုရထားသောကားလဲဖြစ်သောကြောင့် ကောင်းမကောင်းဆိုတာ ပြောဖို့လိုမယ်ကိုမထင်တော့ပါဘူးနော်
ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Waihan Lin Htin ပဲဖြစ်ပါတယ်
Soliddrive.co Myanmar 720p
(1.23 GB) Download Soliddrive.co Myanmar 360p
(733 MB) Download
#Barfi! (2012) #Download Barfi! (2012) Full Movie #Free Barfi! (2012) Download
The Mistress of Spices (2005)
I’ll Follow You Down (2013) DVDRip
Deadpool2(2018) The Super Duper Cut
Hall Pass (2011) DVDRip 720p